China Yankauer Cwangcisa mveliso kunye nabenzi | Amayeza
Ubude Tube: 1.8m, 2.5m, 3.6m okanye wena
Tube enobubanzi: 1/4 "okanye 3/16"
Ityhubhu ye-anti-kink ukunqanda ukubhloka
Iseti yeYankauer yenziwe ngeBakala lezeMpilo lePVC okanye i-DEHP SIMAHLA ye-PVC, iPV engeyiyo inetyhefu, inqanaba lezonyango
Faka i-yankauer setha i-catheter kwaye usebenzise isitshixo ngokugquma umngxunya wesithupha. Sebenzisa i-catheter ecaleni kwentsini ukuya kwi-pharynx ngokujikeleza okujikelezayo, ugcine iseti ye-yankauer ishukuma. Khuthaza isigulana ukuba sikhwehle. Ibhotile yokutsala kufuneka icocwe yonke imihla, kwaye i-tubing kunye ne-Yankauer sucker zitshintshe xa zingcolile. Kuya kufuneka zitshintshwe qho emva kweeyure ezingama-24 zilahle emva kokusetyenziswa kube kanye.
50pcs / ibhokisi 100pcs / ibhokisi
Egqithileyo Umthungo wotyando
Okulandelayo: Ityhubhu eyiRectal
Ityhubhu yokondla iintsana, Ukufunxa iCatheter, Iv Catheter, Utywala Pad, Ubungakanani beBlade yoPhando, Ukulungiswa kotywala,